Igumbi elilodwa lokulala & ichibi eliphezulu ophahleni e-Patong Beach #D62
Pa Tong, Phuket, i-Thailand
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Yoo Dee Phuket Team
Ifulethi elisha lokulala eli-1 endaweni engcono kakhulu ePatong, ukuhamba imizuzu emi-5 ukuya ogwini, ukuhamba imizuzu eyi-10 ukuya eBangla Road naseJungceylon mall.
Lesi sakhiwo sisisha, sinezinsiza ezinhle, ichibi elingamamitha angama-50, idamu lokubhukuda eliphezu kophahla. Igumbi Lokuzivocavoca elinegumbi le-steam, ukuphepha kwamahora angama-24
Ifakwe umbhede ongusayizi wenkosi, ikhabethe lezingubo kanye nedeski elinobungani bekhompuyutha ephathekayo, igumbi lokugezela lifaka phakathi ukuhamba ngezinyawo eshaweni.
Ikhishi lihlome ngokuphelele, linempahla yasekhishini yokusika, amabhodwe amapani, isitofu, isitofu, i-toaster, imicrowave neketela.
Esakhiweni se-condominium sikanokusho kunazo zonke ePatong.
Ikamelo elilodwa lokulala lihlome ngokuphelele; ine-rice cooker, iketela, amapani namabhodwe, i-induction cooker, i-toaster, i-microwave, ifriji kanye nezinto zokusika ekhishini. Kukhona i-smart screen ye-smart TV ekwazi ukufinyelela iziteshi zamazwe ngamazwe. I-inthanethi engenantambo yamahhala ayitholakali kuphela ekamelweni, kodwa futhi endaweni yomphakathi, njengendawo yokwamukela izivakashi nengadi.
Kunamachibi okubhukuda amabili, i-lap pool engamamitha angama-50 eneJacuzzi yezingane, kanye nedamu lokubhukuda elingenasiphelo eliphezu kophahla.
ukubuka okumangalisayo kokushona kwelanga kwesibhakabhaka okungakuqeda umoya. Izindawo ezibanzi zelanga ezikuvumela ukuthi ugcakele elangeni noma ubone izinkanyezi ngaphansi kwesibhakabhaka ebusuku ukuze uphumule ngokuphelele futhi uvuselele kokubili ngokomzimba nangokwengqondo.
Itholakala phakathi nendawo kodwa ithule kakhulu futhi iyimfihlo futhi. Ukuhamba ibanga ukuya ogwini, Jungceylon kanye Bangla Road. Izindawo zokudlela eziningi nezindawo zokungcebeleka eziseduze, i-Family Mart kanye ne-7-11 ziseduze kwesakhiwo.
Ibungazwe ngu-Yoo Dee Phuket Team
Hlola ezinye izinketho ezise- Pa Tong namaphethelo